JUNE&MAY: ဟိုဟို ဒီဒီ
Posted by JuneOne at 1:51 PM
JuneOne September 9, 2012 at 2:20 PM
အိမ်ကလူကတော့ အဲဒီမှာ ပုံမှန် ၀က်သချဉ် ၀ယ်ပြီး သုပ်စားလေ့ရှိတယ်။ငါးချဉ်လဲ ကောင်းတယ် ပြောလို့ ၀ယ်ပြီးကြော်စားဖူးတယ် မဆိုးပါဘူး။ဈေးက ညနေမှဖွင့်တာ။
:P September 9, 2012 at 2:13 PM
Nice view and it looks good for kids to play ...
I m come again n put comment in mm font. Now in bed wif baby :D
JuneOne September 9, 2012 at 2:23 PM
မနေ့မနက်ကလဲ သားအဖတွေ အဲဒီမြောင်းတလျောက် စက်ဘီးရယ် ကားရယ် ယူပြီးလမ်းလျောက်ကြတာ။အဖေ လုပ်သူက အရွက်တွေ၊ပန်းတွေ ကလေးတွေကို အကုန်ခူးပေးတာပဲ။လာဖမ်းမဖမ်းတော့ မသိဘူး။သနပ်ခါး ပန်းတွေလဲ၇ှိတယ် မမ။
မြူးမြူး September 10, 2012 at 7:36 AM
သူတို့မောင်နှမကိုကြည့်ပြီး သမီးလေးတစ်ယောက် အသည်းအသန် လိုချင်နေပါသည်.. သားသားက ၄နှစ်ပြည့်တော့မှာမို့ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ယူဖို့ နောက်တောင်ကျနေပြီ.. ထပ်ယူမလို့ မမရေ..
JuneOne September 10, 2012 at 4:51 PM
မိုးသံစဉ်လေး အဖော်ရတာပေါ့ မြူးမြူးရ။
May I know the address of Yodaya evening market address? Thanks.
JuneOne September 10, 2012 at 4:48 PM
387B Woodlands Road, Singapore 677948'အဲနားမှာ ဓတ်ဆီဆိုင်ရှိတယ်။ဓတ်ဆီဆိုင်ဘေးနားက yewtee industrial estaste လို့ ဆိုင်းဘုတ်ရှိတဲ့ လမ်းထဲ ၀င်သွားလိုက်ရင် အထဲမှာ အိမ်ဆိုင်လို အကြီးကြီး ၃ ဆိုင်တွေ့လိမ့်မယ်။အလယ်ဆိုင်မှာ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေ ၇ှိတယ်။တချို့တွေ CCK ကနေ ၉၆၁ စီးပီးလာဝယ်ကြတယ်။
Thandar Lwin September 11, 2012 at 10:52 AM
ဟုတ်ပ သူတို့ မောင်နှမ ကြည့်ပြီး အရမ်းသဘောကျတာဘဲ ..တို့လဲ သားလေးတယောက် လိုချင်တယ် ...း)
Anonymous September 13, 2012 at 2:49 AM
အယ် ဒီပိုစ့်ကို ဒီနေ့မှမြင်တယ်။ စင်္ကာပူက မြန်မာတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်နော်။ အရာရာဝယ်လို့ရတယ်။ ထိုင်းမှာက ချဉ်ပေါင်ရွက်မရှိဘူး။ သူတို့က ချဉ်ပေါင်ဖူးပဲ စားတာလေ။
အိမ်နားက ရေမြောင်းလမ်းလေးကလဲ သာယာတယ်နော်။ ကလေးတွေအတွက်လည်း ဆော့လို့ရတာပေါ့။ ကျနော်လဲ သူတို့မောင်နှမကြည့်ပီး ကလေးတွေလိုချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ (မိန်းမအရင်ယူလိုက်ဦးမယ်း) )